LineageOS SourceCode ကနေ ကိုယ့်ရဲ့ Android Device အတွက် LineageOS CustomROM တစ်ခု ဘယ်လို Build မလဲ?
ဒီတခါ ကျွန်တော်ပြောပြမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ "LineageOS SourceCode ကနေ ကိုယ့်ရဲ့ Android Device အတွက် LineageOS CustomROM တခု ဘယ်လို Build မလဲ?" ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာပါ။ LineageOS ဆိုတာ Android CustomROM Cummunity တွေထဲမှာ Support Device အများဆုံး၊ Popular အဖြစ်ဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Android User တော်တော်များများလည်း ရင်းနှီးကြသလို အခုမှ စလုပ်မယ့်သူတွေ အတွက်လည်း LineageOS နဲ့ စပြီး Build ကြည့်တာ အလွယ်ကူဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ LineageOS Team မှာ Developers/Contributors တွေ အများကြီးရှိသလို Android Device တော်တော်များများရဲ့ Kernel Source နဲ့ Device Tree တွေ အများကြီးရှိတဲ့အပြင် အမြဲလည်း Update လုပ်ပေးနေလို့ပါ။ ကိုယ်တိုင် Source ကနေ Modification ပိုင်းလုပ်တာ မကျွမ်းကျင်ဘူး ဆိုရင်တောင်မှပဲ အဆင်သင့်ယူလို့ ရပါတယ်။ https://github.com/LineageOS/ အောက်မှာ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Device Name အလိုက် ရှာလို့ ရပါတယ်။
အခု ကျွန်တော်ရဲ့ Guide ကို ဖတ်ပြီးသွားရင် တခြား Android CustomROM တွေလည်း Build တတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Android OS SourceCode ယူရတဲ့ နေရာနဲ့ တချို့ Linux Make Command တွေပဲ ကွာသွားပါလိမ့်မယ်။ (Example: Android CustomROM Teams - OmniROM, AOSiP, AOKP, AOSP Extended, Dirty Unicorns, ResurrectionRemix and etc...)
တခုတော့ သတိပေးထားပါရစေ။ Android OS SourceCode ရဲ့ Filesize က 20GB နဲ့ အထက်မှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Internet ကောင်းမှပဲ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ Build တဲ့ နေရာမှာ Linux မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Mac မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Build လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Linux မှာပဲ Build ပြသွားမှာပါ။ ခုလောလောဆယ်တော့ ubuntu 17.04 ပဲ သုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Ubuntu ပေါ်မှာ build တာပဲ ဥပမာပေး ပြောသွားမှာပါ။ Build မယ့် Target Android Device ကတော့ Google Nexus 5X ပါ။
LinageOS Official Website
LineageOS Wiki & Documentation
LineageOS Downloads: for support Devices
LineageOS XDA Forum
LineageOS Developers and Contributors
LineageOS Project SourceCode
LineageOS G+ Community
Linux OS သုံးထားတဲ့ Computer တလုံးရှိရပါမယ်။
OpenJDK Install လုပ်ထားရပါမယ်။
Python 2.7+ Install လုပ်ထားရပါမယ်။ (ဘာလို့လဲဆိုတော့ Google ရဲ့ git-repo က Python နဲ့ရေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Python Install လုပ်မထားရင် git-repo က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး)
Google ရဲ့ git-repo လည်း သုံးတတ်ရပါမယ်။ (git-repo အကြောင်းကို ဒီမှာ ဝင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးသွားရင် git-repo command တွေကို ဒီမှာ လေ့လာကြည့်ပါ။)
git-repo ဆိုတာ Git ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး Google က Develop လုပ်ထားတဲ့ Tool တခုပါ။ Android ROM Development ပိုင်းမှာ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ [ git-repo - Multiple Repository Tool ] လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံက Repo တခုဆောက်၊ အဲဒီထဲမှာ xml File လေးတခုဆောက်၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့၊ ကိုယ် Remote လုပ်ချင်တဲ့ repo တွေကို Link ပေး၊ နောက် repo sync ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Local Machine ထဲကို တနေရာတည်းမှာပဲ Repository တွေအမျာကြီး Download ဆွဲလို့ရပါတယ်။ သဘောက ROM တခု Build ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Android SourceCode Repository တွေက အများကြီးထဲကမှ တခုချင်းစီလိုက်ပြီး git clone မနေပဲ xml File လေးကနေ Repository အများကြီးစုပြီး Local ထဲကို Download ဆွဲလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။
Step 1 : OpenJDK Installation
ပထမဦးဆုံး OpenJDK ကို ကိုယ့်ရဲ့ Computer မှာ Install လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ Terminal ကိုဖွင့်ပြီး အောက်က Command လေးတွေ ရိုက်ပေးပါ။
OpenJDK Install တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ် Build မယ့် Android Version ပေါ်မူတည်ပြီး Install လုပ်ရမယ့် OpenJDK Version တွေ ကွဲသွားမယ် ဆိုတာကို သတိပြုရပါမယ်။
Android Nougat ကနေ Android Oreo အတွက်ဆိုရင် OpenJDK 8 ကို Install လုပ်ပေးပါ။
Android Lollipop ကနေ Android Marshmallow အတွက်ဆိုရင် OpenJDK7ကို Install လုပ်ပေးပါ။
Android Gingerbread ကနေ Android KitKat အတွက်ဆိုရင် OpenJDK6ကို Install လုပ်ပေးပါ။ (သူ့ရဲ့ အောက်က Android Version အတွက်တော့ ဘယ်သူမှလည်း Build မှာ မဟုတ်တော့လို့ မပြောတော့ပါဘူး။)
Step2: Python Installation
နောက်တဆင့်ကတော့ Python install ပေးဖို့လိုပါတယ်။ Python 2.7 လောက်ဆို အဆင်ပြေပါပြီ။ (Python 3+ ဆို git-repo အတွက် သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် 2.7 ပဲ Install လုပ်ပေးပါ။)
Step3: Build-Tools Installation
လိုအပ်တဲ့ Build-Tools တွေ Install လုပ်ဖို့အတွက် အောက်က Command လေးကို Terminal မှာ ရိုက်ပေးပါ။
Step4: Git and Repo (git-repo) Installation
အရင်ဆုံး Git Install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် လုပ်ပေးပါ။ (Install လုပ်ထားပြီးသားဆိုရင်တော့ ဒီအဆင့်ကို ထပ်လုပ်စရာမလိုပါဘူး။)
git config --global user.name "zawzaw"
git config --global user.email "zawzaw@gmail.com"
Google ရဲ့ git-repo ကို Install လုပ်ပေးရပါမယ်။ (အသုံးဝင်ပုံကို Introduction မှာ ရှင်းပြထားပြီးဖြစ်လို့ ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။)
Android OS ကြီးတခုလုံးအတွက် လိုအပ်မယ့် Repositories တွေကို Android Platform Manifest Repo ကနေ Download လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Android Platform Manifest မှာ ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ Android OS အတွက် လိုအပ်တဲ့ Repos တွေဖြစ်တဲ့ frameworks repos, bootable recovery, kernel trees(for AOSP), device trees(for AOSP), system repos, hardware repos, system packages apps, Prebuilt GCC Toolchains and buildtools, external repos, vendor, tools repos စတာတွေ အကုန်ပါပါတယ်။ Filesize ကလည်း 20GB နဲ့ အထက်မှာရှိပါတယ်။ မူရင်း AOSP SourceCode ရဲ့ Filesize ဆိုရင် ဒီထက်မက များပါတယ်။
LineageOS Main SourceCode - All Repos
LineageOS - Android Platform Manifest
ပထမဆုံး Sources တွေ Download ဖို့အတွက် Directory တခု ဆောက်ပါမယ်။
LineageOS SourceCode ကို Download ပါတော့မယ်။
-b နောက်ကကောင်က 'lineage-15.0' က branch name ပါ။
lineage-15.1(Coming soon...) က Oreo(8.1.0+) build အတွက်ပါ။
lineage-15.0 က Oreo(8.0.0) build အတွက်ပါ။
cm-14.0 သုံးရင် Nougat(7.0) build အတွက်ပါ။
cm-14.1 သုံးရင် Nougat(7.1.1-7.1.2) build အတွက်ပါ။
ကြိုက်တဲ့ Android Version ကို Build နိုင်ပါတယ်။
Android 8.0.0 (Oreo) Version Build ချင်သူများက "lineage-15.0" branch ကို သုံးပါ။
Android 8.1.0 (Oreo) Version Build ချင်သူများက "staging/lineage-15.1" branch ကို သုံးပါ။
repo init -u git://github.com/LineageOS/android.git -b staging/lineage-15.1
Sources တွေ download ဖို့ အောက်က command လေး ရိုက်ပေးပါ။
အဲဒီနောက်မှာတော့ Sources တွေ Downloading လုပ်နေတဲ့ အပိုင်းပါ။ SourceCode တွေ Download တဲ့ Process ကတော့ မိမိရဲ့ Internet Connection ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကြာပါလိမ့်မယ်။
Official Documentation: LineageOS Building for Nexus 5X
အရင်ဆုံး Source ကနေ Compilation မလုပ်ခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့် အရာတွေကို ပြောပြပေးပါမယ်။
Introduction မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ကိုယ့် Android Phone အတွက် လိုအပ်တဲ့ Kernel Source နဲ့ Device Tree Repo တွေကို github.com/LineageOS/ အောက်မှာ သွားရှာလို့ ရပါတယ်။ ဘယ်လို ရှာရမလဲ ပြောပါမယ်။ Name ပေးပုံ ပေးနည်းကို သိရင် ရပါပြီ။
Example for Nexus 5X (Nexus 5X ရဲ့ Device Name ကို bullhead လို့ ခေါ်ပါတယ်။)
Format : Device Tree
Example : Device Tree for Nexus 5X
Format : Kernel Source
Example: Kernel source for Nexus 5X
Location က ဘယ်မှာ သွားထည့်ရမလဲဆိုရင် Download လုပ်ထားတဲ့ Source dir အောက်က /device အောက်မှာ သွားထည့်ပေးရမှာပါ။
ROM build တဲ့နေရာမှာ Kernel ပိုင်းက နှစ်မျိုးကွဲပါမယ်။ Kernel Source ကနေ Build တာရယ်၊ အဆင်သင့် Build ထားပြီးသား Prebuilt Kernel ကနေ Build တာရယ် ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ Kernel Source ကနေ Build တာပဲ အကြံပေးပါတယ်။
ပြီးတဲ့နောက် Kernel Source ကနေ Build မယ်ဆိုရင် Device Tree ထဲမှာ ပြင်ဆင်စရာရှိပါတယ်။ Nexus 5X အနေနဲ့ ပြောပါမယ် /device/lge/bullhead/BoardConfig.mk ကို TextEditor တခုနဲ့ ဖွင့်ပြီး အောက်က Code လေးတွေ ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါ။ (အခုအဆင့်က ကိုယ်တိုင် Modify လုပ်နိုင်အောင် ပြောပေးတာပါ။ LineageOS Source ကနေဆို မလိုပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ Official Contributor တွေ အဆင့်သင့် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ သူတို့ Support လုပ်ပေးထားတဲ့ Device တွေအတွက်ဆိုရင် လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။)
# Inline Kernel Build
ဒီအဆင့်က ကျွန်တော် ပထမဆုံး ရေးထားခဲ့တဲ့ Building-Kernel ဆိုတဲ့ Tutorial ကို ဖတ်ပြီးမှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
Line4- Kernel Build ဖို့အတွက် Kernel Configuration လုပ်ပေးရပါတယ်။
နောက်တဆင့်က Kernel source အပိုင်းပါ။ သွားထည့်ပေးရမယ့် Location က Source dir အောက်က /kernel အောက်မှာ သွားထည့်ပေးရမှာပါ။
Example: for Nexus 5X (ဒီ Location က Device Tree ထဲမှာ Kernel Source Path လမ်းကြောင်း ပြန်ပေးရမှာပါ)
ဒါတွေ ပြည့်စုံသွားရင်တော့ LineageOS CustomROM တခု Build ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပါပြီ။
ဒါကတော့ နောက်ဆုံးအဆင့် ရောက်ပါပြီ။ Download လုပ်ထားတဲ့ Source Dir ထဲ ဝင်လိုက်ပြီး Terminal ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်က Command လေး ရိုက်ပေးပါ။
ပြီးရင် အောက်က Command လေး ဆက်ရိုက်ပေးပါ။ (AOSP တုန်းက lunch ဆိုတဲ့ command နဲ့ ဆင်တူပါတယ်)
Note: ဒီနေရာမှာ မလိုတာတွေ ချန်ထားခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ Compilation Process Time မြန်အောင် "ccache" Setup လုပ်တဲ့ အပိုင်းတွေ မပြောတော့ပါဘူး။ ရှုပ်သွားမှာ ဆိုးလို့ပါ။ နောက်တခုက Android CustomROM Team တခုနဲ့ တခုက သူတို့ ROM Build ဖို့အတွက် Make Build Command တွေက မတူကြပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ AOSP/platform/build (https://android.googlesource.com/platform/build) ဆိုတဲ့ Repo တခု ရှိပါတယ်။ သူက OS ကြီး တခုလုံးအတွက် Makefile နဲ့ ရေးထားတဲ့ Build System တခုပါ။ နားလည်ရင် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ Make Build Command တွေ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
Screenshots တွေကိုလည်း ထပ်ပြီး Upload မလုပ်တော့ပါဘူး။ တူတူပါပဲ။ AOSP Building Guide မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
LineageOS 14.1 နဲ့ အထက်အတွက် Jack Configure လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအဆင့် အနေနဲ့ ROM Build ဖို့အတွက် အောက်က Command လေး ဆက်ရိုက်ပေးပါ။ (bullhead ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ဖုန်းရဲ့ Device Name ပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားပါလိမ့်မယ်)
Output ထွက်မယ့်နေရာကတော့ အောက်က Location အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Output - /out/target/product/bullhead/ အောက်မှာ flashablezip အနေနဲ့ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
Compilation Process Time ကတော့ မိမိ Computer ရဲ့ CPU Core ပေါ် မူတည်ပြီး ကြာပါလိမ့်မယ်။